Izikolo ezi-2 eziPhezulu zezonyango eNew Mexico 2022
Izikolo ezi-2 eziPhezulu zezonyango eNew Mexico
Kuya kuba nomdla kuwe ukwazi ukuba kukho iZikolo zezoNyango ezi-2 kuphela eNew Mexico. Apha ngezantsi kukho inqaku elinika amagama abo, inkcazelo, into abayenzayo kanye, kunye nalapho banokufumaneka khona.
INew Mexico lelinye lamazwe akuMzantsi-ntshona weUnited States. Enye yeempawu zayo ezintle eziphawulekayo ziiNtaba zeNtaba ezikumazantsi eeNtaba zeRocky.
INew Mexico ijikelezwe ngamanye amazwe amaninzi abelana ngemida nayo. Yabelana ngemida kunye neTexas ngasempuma nakumazantsi-mpuma, i-Oklahoma ukuya emantla-mpuma, kunye namazwe aseMexico aseChihuahua naseSonora emazantsi.
Ikomkhulu lelizwe yiSanta Fe, eyasekwa ngo-1610, kwaye yaziwa ngokuba sisihlalo sikarhulumente saseNuevo México eNew Spain. Okwangoku, yeyona dolophu inkulu eUnited States, enesona sixeko sikhulu njengeAlbuquerque.
Inkqubo yemfundo eNew Mexico iqala ngenqanaba le-Pre-kindergarten. I-Pre-kindergarten ukuya kwibanga le-12 eNew Mexico isebenza kwizithili kwaye ilawulwa ziibhodi zezikolo ezinyulwe ekuhlaleni kunye neentsumpa. Ngo-2013, iNew Mexico ibinabafundi abamalunga nama-338,220 ababhalise kwizikolo ezingama-877 kwizikolo eziyi-146. Bekukho inani lilonke lootitshala abangama-22,201 kwizikolo zikarhulumente, okanye masithi, utitshala omnye kubafundi abali-15.
ENew Mexico, bekukho umlawuli omnye kubafundi abangama-264, xa kuthelekiswa nomyinge womlawuli omnye kubafundi abangama-295 kwinqanaba likazwelonke. Ngokwe-avareji, iNew Mexico ichithe i-9,012 yeedola ngomfundi ngamnye ngo-2013, neyibeke kwindawo yama-38 ephezulu kwilizwe lonke. Izinga lokuphumelela kurhulumente laliyi-70.3 yeepesenti ngo-2013.
1. IYunivesithi yaseNew Mexico School of Medicine (UNM School of Medicine)
Burrell College of Osteopathic Medicine kwiYunivesithi yaseNew Mexico State
Ii-FAQ Kwizikolo ezi-2 eziPhezulu zezoNyango eNew Mexico
Ngaba iNew Mexico inaso isikolo sobugqirha?
Zingaphi izikolo zobugqirha eziseNew Mexico?
Ixesha elingakanani isikolo sezonyango e-UNM?
Oku kulandelayo kuphela kwezikolo ezikhoyo kunye nezibini eziphezulu zezonyango eNew Mexico. Bazi:
IYunivesithi yaseNew Mexico School of Medicine (UNM School of Medicine)
Burrell College of Osteopathic Medicine kwiNew Mexico State
1. KwiYunivesithi yeSikolo esitsha soNyango saseMexico (iSikolo sezoNyango seUNM)
Yasekwa ngo-1961. IYunivesithi yaseNew Mexico School of Medicine (UNM School of Medicine) sesinye sezikolo zonyango eNew Mexico. Sisikolo sikarhulumente sezonyango esigama laso libekwe phezulu kwaye oku kwenza ukuba isikolo sezonyango esiseNew Mexico sihlale sihlala siphakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo.
NgokweNgxelo ye-US kunye neNgxelo yeNdaba, ngo-2019, i-UNM sesinye sezikolo zonyango eNew Mexico esathi sathathwa njengesona sikolo sama-21 sigqwesileyo kukhathalelo oluphambili kunye ne-78th igqwesileyo malunga nophando. I-Rural Medicine kunye ne-Internal Medicine iinkqubo ezifundwayo kwiYunivesithi yaseNew Mexico School of Medicine (i-UNM School of Medicine) ziye zabhalwa rhoqo phakathi kwe-10 ephezulu.
Ukongeza, ukuhanjiswa kwekharityhulam ye-MD yezikolo zonyango eNew Mexico kuyafana neenkqubo ezikwezinye iiyunivesithi. Iminyaka emibini yokuqala yomsebenzi osisiseko kwi-UNM iquka izifundo zesayensi, kwaye zihlelwe kwiibhloko zeenkqubo zamalungu.
Ngeli nqanaba kwi-UNM (esinye sezikolo zonyango eNew Mexico), abafundi bavezwa kumava onyango njengoko benethuba lokusebenza nezigulana. Ngale ndlela, baphuhlisa izakhono ezinxulumene nonxibelelwano kunye nokuqiqa kweklinikhi.
Iminyaka emibini yokugqibela kwi-UNM (esinye sezikolo zonyango eNew Mexico) ibandakanya oomabhalana abanyanzelekileyo nabakhethiweyo. Ngeli xesha, abafundi baye bafunde okuninzi malunga neenkonzo ezininzi ezisekwe kuluntu kunye ne-ambulatory.
I-UNM (esinye sezikolo zonyango eNew Mexico) ibonelela ngeenkqubo ezimbini zesidanga: MD/PH.D. kunye ne-BA / MD Inkqubo ye-BA / MD yenzelwe ukujongana nengxaki yokungabikho koogqirha. Abafundi bezikolo eziphakamileyo zaseNew Mexico abafuna ukuba ngoogqirha bahlala bekhuthazwa ukuba bafake isicelo sale nkqubo.
Baza kuqala bafumane isidanga sokuqala, kwiprogram eyayilungiselelwe ukubalungiselela kakuhle ukuze baqhelisele amayeza. Emva koko, baya kuqala ukufunda kwisikolo sezonyango.
Izicelo zokwamkelwa kwesi sikolo sezonyango eNew Mexico zenziwa ngeqonga le-AMCAS kwaye abafundi abanomdla kufuneka bahlangabezane nazo zonke iimfuno ezichazwe kwiwebhusayithi yabo. Babeka phambili kakhulu abahlali baseNew Mexico kwaye bamkele kuphela abafundi abaphuma kurhulumente ukuba banobudlelwane obuqinileyo norhulumente. Kubafundi abayi-93 abaphumelele imatriki ngo-2018, balishumi kuphela abebengekho esikolweni.
Omnye umba omkhulu kukuba i-UNM School of Medicine, esesinye sezikolo zonyango eNew Mexico sesinye sezona zifikelelekayo. Imfundo yabahlali baseyunivesithi yi- $15,848 kuphela.
Ndwendwela iwebhusayithi ngolwazi oluthe kratya
IKholeji yaseBurrell yeOsteopathic Medicine sisikolo sezonyango sabucala esitsha. Sesinye sezikolo zonyango eNew Mexico. Yasekwa ngo-2013 kodwa iklasi yokuqala yabhaliswa ngo-2015.
Okwangoku banokuvunywa okwethutyana nguMbutho waseMelika Osteopathic kwaye bekulindeleke ukuba babe nolwamkelo olupheleleyo bakuba bethweswe isidanga seklasi yokutshata ngoko, ngonyaka ka-2020.
Inkqubo ye-DO yesi sikolo sezonyango eNew Mexico yahlulahlulwe yaba sisigaba esisisiseko sekhosi kunye nesigaba sokujikeleza kweklinikhi. Imfundo isekelwe ngokungqongqo kwisigulane, ngoko ke bayaqinisekisa ukuba abafundi bafumana izakhono ezaneleyo kwisigaba sokuqala sokungena kubuomabhalane. Ngaphandle kwezifundo zesayensi, baphuhlisa iklinikhi esisiseko kunye nezakhono zonxibelelwano, kunye neenqobo zokuziphatha ezisemva kokusebenza koogqirha.
Esi sikolo sobugqirha eNew Mexico sinezixhobo zale mihla. Abafundi bahlala bekwazi ukufikelela kwi-anatomy, ukulinganisa, kunye neelebhu zokuxilongwa ngokomzimba, kwaye baqeqeshwa ngeNkqubo yeSigulana esiPhambili (SPP).
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, abafundi bahlala begqibezela ukujikeleza kwabo kwezonyango eLas Cruces, e-El Paso (eTexas), e-Albuquerque (eArizona), eTucson, okanye eMpuma yeNew Mexico. Iziko kananjalo uvule izithuba ezimalunga ne-100 zabafundi abathweswe izidanga.
Ngo-2018, baye bajongana nezicelo eziyi-5,254 ezivela kwinkqubo yokwamkelwa kwabafundi ye-AACOMAS. Bali-162 kuphela abafundi abaphumelele imatriki. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abamkeli abafundi bamazwe ngamazwe kwaye babeka phambili abafaki-zicelo abavela kummandla osentshona.
Ewe iyenza. Kodwa bambalwa.
Zimbini izikolo zobugqirha eNew Mexico.
Yikhosi yeminyaka emine enekharityhulamu echazayo enemiba eyimpumelelo yezifundo eziqhelekileyo (ezisekelwe kwisifundo) ikharityhulam yesikolo sezonyango enemiba etsha yolwazi oluzilawulayo.nakwikharityhulamu yayo yezemfundo.
I-7 iidyunivesithi ezincinci ezincinci eCanada
Post Previous:7 Iidyunivesithi ezigqwesileyo zamaKristu eCanada
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-10 eziGqwesileyo zonyango e-UK